Indiana: Isi obodo ahia ahia nke uwa | Martech Zone
Nyocha na-akpọsa n'ihu ọha Ebumnuche Azụmaahịa Indiana, mgbasa ozi mgbasa ozi mba na-eme ka Indiana dị ka onye ndu nke ngwa ahịa azụmaahịa na-eto ngwa ngwa, nke TechPoint chepụtara dị ka ahịa tụrụ atụ.
Ebumnuche nke Mmemme Azụmaahịa Ebumnuche:
Mee ka amara na mpaghara a na-emepe ụfọdụ ngwaahịa na ọrụ ndị kachasị ọkaibe na mba ahụ mgbe a bịara na mbọ ahịa ahịa na teknụzụ sitere na ya.
Mee ndị ahịa maka azụmaahịa dị ugbu a site n'ọkwalite mba. Nke a, n'aka nke ya, ga-enyere anyị aka ịnọgide na-akpọrọ ndị gụsịrị akwụkwọ kachasị nwee agụmakwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ Indiana ma na-aga n'ihu na-eto eto na ohere azụmaahịa.
Dọrọ ụlọ ọrụ iji mepụta ọrụ na itinye ego na Indiana. A na-ahụ Indiana anya dị ka otu n'ime steeti kachasị ọnụ ala maka ndị gụsịrị akwụkwọ na kọleji. Ọnọdụ steeti anyị dị oke ọnụ ahịa na ọnụ ala anyị dị ọnụ ala na-eme ka ịmalite azụmaahịa dị oke ọnụ ala - na-enye ohere ka mma maka ọganiihu na uto.
Mụ na Chris Baggott, Obi dị m ụtọ na m bụ akụkụ nke ụzọ a site n'oge mbụ. M na-aja Jim Jay mma na ìgwè ndị ọzọ na Techpoint na Ball State. Ha emeela ọrụ dị ịtụnanya n'ịzụlite na ịkwanye ụzọ a.
Ebumnuche Azụmaahịa Indiana
Kedu ihe a tụrụ ahịa? Azụmaahịa a tụrụ atụ bụ microcluster azụmaahịa teknụzụ lekwasịrị anya na-emepe emepe ngwa ọrụ yana usoro dị iche iche maka azụmaahịa iji jiri data melite ma ọ bụ dozie mbọ ahịa ha na-azụ ma ndị ahịa na azụmaahịa.
Gini bu ulo ahia ahia turu? Companieslọ ọrụ ịzụ ahịa atụpụtara na-enye ikpo okwu ma ọ bụ ọrụ maka ire ahịa dijitalụ site na email, mgbasa ozi mmekọrịta, ọchụchọ, vidiyo, mkpanaka na teknụzụ ndị ọzọ na-agbanwe ngwa ngwa, ha na-enyekwa ndị ahịa nkwụghachi na ntinye ego. DK New Media dị mpako ịbụ ụlọ ọrụ na etiti microcluster a na-agbanwe agbanwe.
Gini mere Indiana ji buru onye isi na ulo ahia ahia emere? Karịrị 70 ụlọ ọrụ na-ere ahịa kpọọ steeti Indiana n'ụlọ, ma dabere na data dịnụ, mpaghara ahụ na Indiana toro 48% karịa mba ndị ọzọ.
Yabụ - ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ kọleji, azụmaahịa chọrọ isonye, ​​azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa na-achọ ịkwaga maka ohere ka mma, ma ọ bụ ụlọ ọrụ isi obodo na-achọ itinye ego…. lelee anya gị maka ụfọdụ mkpuchi mba na Indiana si Measured Marketing Initiative!
Tags: Oti mkpuamazon kwurufacebook mgbasa ozingwa facebookihe ọsịseala na-eritwitter ad na-emefuiche ihu igwe